Qeyb ka mid ah raashinkii gargaarka ee Turkiga oo lagu iibsaday Kismaayo – STAR FM SOMALIA
Qeyb ka mid ah raashinkii gargaarka ee Turkiga oo lagu iibsaday Kismaayo
Waxaa soo baxaya fadeexo ku aadan in qeybtii raashinkii gargaaka Turkiga ee la geeyay Kismaayo la iibsaday, iyadoo Mas’uuliyiin ka tirsan Jubbaland ay ku lug leeyihiin musuq maasuqa lagu sameeyay raashinkaas gargaarka ee loogu tala galay Gobolada Jubbooyinka iyo Gedo.
Guddoomiyaha Gobolka Gedo Axmed Buule Canjeex oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa ku eedeeyay Madaxweyne kuxigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan inuu iibsaday raashinkii gargaarka ee loogu tala galay Gobolka Gedo.
“Waxaan heynaa cadeymo in raashinkii Turkiga ugu tala galay dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan qeybtii Gedo in lagu iibsaday Kismaayo, waxaa iibsaday Madaxweyne kuxigeenka Jubbaland, raashinka wuxuu ahaa 1,200 oo tan”ayuu yiri Guddoomiyaha Gobolka Gedo.
Mr Buulle ayaa sheegay in raashinkaas loogu tala galay Gedo, isla markaana ay aheyd in la soo gaarsiiyo degmooyinka Gedo oo uu xusay in gebi ahaanba ay xor yihiin, maadaama Jubada Hoose iyo Jubadda Dhexe aanay dhamaan degmooyinkooda xor aheyn.
Dhinaca kale Madaxweyne kuxigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa iska fogeeyay eedeymahaas, isagoo xusay in aanay waxba ka jirin.
“Waa been arrintaas, raashin aan iibsaday ma jirto, raashinkaas sidii loogu tala alay ayaa dadka u gaarsiinay, shalay oo isniin ah ayaa qeybinteeda ka bilowday degmada Doolow ee Gobolka Gedo”ayuu yiri Madaxweyne kuxigeenka Jubbaland.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo lagu wareejiyay deeqdii uu Turkiga u soo diray Soomaaliya dhamaadkii bishii May ayaa muddooyinkii u dambeeyay waday qeybinta raashinka gargaarka oo la gaarsiinayay maamulada qaar, hase ahaatee waxaa soo baxaya in aanay deeqdaas sidii loogu tala galay aanay dadka Soomaaliyeed u gaarin.
Ra’iisul Wasaarihii Hore ee soomaaliya Farmaajo oo Ka hadlay Amniga Dalka iyo Sida ay Dawlada uga Gaabisay
DHAGEYSO:-Warka Duhur Starfm 01-08-2016